Julian, Qoraa SmartMe ah
Dom » Maqaallo uu daabacay Julian
Eve Energy - maxaad ugu baahan tahay godad caqli badan?
Xaawa, tamarta habeenka, socket, Homekit, banaanka smart
Soo saaraha Jarmalka ee xalalka xariifka ah, EVE, wuxuu bixiyaa noocyo badan oo qalabka Apple HomeKit ah. Sidaa darteed haddii aad haysatid iPhone oo aad rabto inaad dhisto gurigaaga Smart - waxaad ku jirtaa meesha saxda ah! Ka dib baaritaanka dareeraha ka hor ...
Eve Door & Window - tijaabada albaabka iyo dareemaha xira daaqada taageere Apple ah
Apple HomeKit, Xaawa, albaabka & daaqada, Homekit
Nooca Jarmalka ee Eve wuxuu si dhow ula shaqeeyaa Apple HomeKit. Markaa haddaad tahay isticmaale qalab leh "tufaax" oo aad rabto inaad dhisto guri caqli badan - waxaad timid meeshii saxda ahayd! Dareeraha Eve Door & Window ayaa maanta la soo bandhigay, in kasta oo ay jiraan xalal aan caadi ahayn ...
Suuqa dhexdiisa oo ay daadadku mariyeen GRP, ciyaartoygan ayaa la waayey!
7 Maarso 2021
Marshall, headphones, tws
Suuqa waxaa buux dhaafiyay dhagaha dhagaha runta ah ee wirelesska. Xitaa ciyaartoy sida Razer ah ayaa soo galay. Halyeey soo saaraha maqalka, Marshall, ayaa maqnaa muddo dheer. Ilaa maanta ... Waxaan lahaan jiray lahaanshahooda heer-gala ee Marshall Major-over model ...
DJI waxay dooneysaa inay dib u qeexdo duulista diyaaradaha aan duuliyaha laheyn
dji, drone, Ciyaar
DJI waxay casuumaad u dirtay horyaalkeeda cusub. Markay ahayd 2-dii Maarso saacaddu markii ay ahayd 15:00 waqtiga Boolishka, soo-saaruhu wuxuu soo bandhigay diyaaradeeda cusub, taas oo ah "dib-u-qeexida duulista". Ogeysiisku wuxuu u muuqdaa mid hami weyn leh, laakiin sida aad u aragto DJI waxay u socotaa sida duufaan oo kale. Kadib ...
Samsung Galaxy S21 (Un) ayaa xirxirtay - wadadee u socotaa?
30 Janaayo 2021
Samsung, burooyinka samsung, samsung galaxy s21, samsung aan xirxirin
Sida meme duug ah oo ka socda PewDiePie uu leeyahay, "way isbeddelaysaa, gadaal ayey u socotaa." Sidan ayaad awalba u bilaabi kartaa inaad eegto horumarka taleefannada casriga ah. Shirka tusay Samsung Galaxy S21 wuxuu ahaa mid aad u horaantii sanadkan, ...
Isugeyn dhameystiran? Dib-u-eegista Scanwatch ee Withings
smartwatch, toban meelood, Wareegyada iskaanka iskaanka ah
Markii uu Withings soo saaray Scanwatch-ka 'Withings Scanwatch' ee CES Janaayo 2020 (xusuusnow waqtiyadaas?), Waan ogaa inay tani noqon doonto jihada tixgelinta dhabta ah. Xaqiiqdii waxaa jiray laba su'aalood: miyay tirtiri doontaa faa'iido darrooyinka qaabka HR ee Birta (tii hore ...